Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba an'i Child
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray fantatra amin'ny anarana hoe "Sakinho". Ny tantaranay momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza Bukayo Saka Plus momba ny tantaram-piainan'ny Untold Biography dia mitondra anao ny fitantarana feno zava-nitranga lehibe hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy fivoaran'ny Bukayo Saka. Ny trosa Ny masoandro ary Nettheroy
Ny famakafakana dia misy ny fiainany voalohany sy ny fiaviany, ny fanabeazana ary ny fananganana asa, ny fiainam-piandohana, ny lalana mankany amin'ny tantaran'ny laza, mitombo ny tantara malaza, ny fifandraisan'ny tena, ny fiainam-pianakaviana, ny zava-misy sy ny fiainany sns
Eny, ny rehetra dia mahita azy ho toy ny endrika tsara tarehy tarehy zazakely amin'ny fanantenana baolina kitra. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny biolojia Bukayo Saka izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Bukayo Saka dia teraka tamin'ny Andro faha-5 tamin'ny volana septambra 2001 ho an'ny ray aman-dreny Nizeriana tao an-tanànan'i London, United Kingdom. Ireo ray aman-dreniny dia mpifindra monina Nizeriana izay talohan'ny nahaterahany dia nandao an'i Nizeria mba hanorim-ponenana ao London hitadiavana fiainana bebe kokoa sy fotoana mety ho an'ny zanany mbola tsy teraka.
Rehefa teraka izy, dia nantsoina hoe "ray aman-dreniny"Bukayo”Izay anarana unisex midika hoe"Manampy amin'ny fahasambarana ”. Bukayo dia anarana matetika ampiasaina avy amin'ny foko Yoruba atsimo andrefan'i Nizeria. Izany dia midika hoe i Busayo Saka dia avy amin'ny vondrom-poko Yoruba any Nizeria.
Nihalehibe tao an-drenivohitr'i Londres i Saka tamin'ny faritry ny fianankaviana ambany antonony. Ny rainy sy ny reniny dia toa ny ankamaroan'ny mpifindra monina Nizeriana izay Tsy nanana fanabeazana ara-bola tsara indrindra fa nanao asa miaramila, ary matetika no niady tamin'ny vola mba hikarakarana ny ankohonany any UK ary hiverina any Nizeria.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Fanabeazana sy fananganana karama
Tahaka ny ankamaroan'ny Nizeriana any Londres, ny fianakavian'i Bukayo Saka dia liana amin'ny baolina kitra. Ny fitiavan'izy ireo ny baolina kitra sy ny faniriana tsy mitongilana hampiakatra ny fenitry ny fiainany no nahatonga ny fiheverana an'i Bukayo hanana fanabeazana baolina kitra any London.
Hray aman-dreny tia baolina kitra izay nanohana an'i Arsenal, dia voajanahary ho an'i Bukayo tanora ny mampifantoka ny sainy amin'ny fanaovana azy ao amin'ny oniversite club. Io no dadan'i Bukayo Saka izay tompon'andraikitra tokana mba hiantohana ny zanany hiorim-paka sy hanetry tena amin'ny fikatsahana ny hahomby amin'ny fitsipi-pianarana mahomby. Amin'ny tenin'i Bukayo;
'Ny dadako dia fitaomam-panahy ho ahy. Hatramin'ny mbola kely aho dia navelany hiorina foana aho '
Ny fampiharana ho an'ny Akademia taranja baolina kitra ao Arsenal dia azo natao ho an'ireo mpianatra tena manan-talenta. Satria fantatry ny ray aman-dreniny fa manana an'izany i Bukayo, dia tsy nisalasala nampihatra izy ireo. Soa ihany fa niantso ny Akademia Arsenal ary nanaporofo ny hasarobidiny izy, nandia ny fitsapana azy ireo. Tamin'ity vanim-potoana ity, ny avonavon'ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany dia tsy mahalala fetra.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Saka dia nanomboka ny asany ArsenalTsy mora izany ny fianarako tao amin'ny Hale End, satria feno sorona betsaka avy aminy sy ny ray aman-dreniny. Amin'ny teniny;
"Sarotra tokoa ny ray aman-dreniko manampy ahy ho tonga eto fa nomen'izy ireo foana daholo izy ireo ary nampiofana ahy"
Ity tolona ity dia nanome aingam-panahy an'i Saka izay nanampy azy hiasa mafy mandritra ny fotoana rehetra ary hahazoana antoka fa hanome izay tsara indrindra izy. Tahaka ny mpiara-miasa taminy ihany, naka sary sampy i Saka. Raha ny sasany kosa nandeha Thierry Henry, Dennis Bergkamp, sns, dia naka ny angano taloha sy Arsenal teo aloha, Freddie Ljungberg izay efa mpanazatra tanora tao amin'ny klioba io.
Freddie Ljungberg dia nanampy an'i Bukayo Saka ho lasa tahaka ny ankehitriny. Image Credit- Football365
Amin'ny maha mpilalao mpilalao Akademia U15 dia i Freddie Ljungberg dia nanome torohevitra tsara indrindra an'i Bukayo Saka. Nanampy an'i Saka izy hijanona ho ambany fanetren-tena ary hiasa mafy kokoa satria nino izy fa tsy amin'ny fotoana tsy hahatongavana ho mpilalao ambony indrindra ilay zazalahy kely.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Road to Fame Story
Izay rehetra nambaran'i Freddie Ljungberg momba azy dia tanteraka. Rehefa nivadika i 17 taona i Saka dia nomena fifanarahana matihanina amin'i Arsenal izy ary nampiakarana amin'ny ilan'ny 23. Ary koa, taorian'ny fampisehoana fampisehoana nahatalanjona, i Saka dia nantsoina ho ekipa zokiolona ao amin'ny klioba ihany koa.
Raha niara-niasa tamin'ny ekipa zokiolona izy dia nanomboka nitady fotoana iray tamin'ny lalao fifaninanana mba tsy hanazavana ny asany ary hiady amin'ny fifaninanana. Raha niresaka fifaninanana, nafindra an'i Alex Iwobi ary Aaron Ramsey dia fanamby lehibe kokoa noho ny namany mpiara-mianatra Reiss Nelson. Ny fiovam-po efa niandrasana voalohany dia tamin'ny 2018 / 2019 Europa League Final izay nametrahan'i Saka ny marika amina fampisehoana nahagaga.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Mitsangàna amin'ny tantara
Ny fiafaran'ny vanim-potoana 2018 / 2019 dia samy nahita Aaron Ramsey ary Alex Iwobi nandao an'i Arsenal ho an'ny Juve sy Everton. Izany dia nanome ny efitrano ho an'ny Bukayo mba hananana fifaninanana kely kokoa, miaraka amin'ny olona iray ao amin'ny karre-n'izy ireo mba hifaninana ho amin'ny toerany havia.
Tamin'ny 19 Septambra 2019 dia nahita an'i Bukayo Saka izay nifanesy teo aminy sy Reiss Nelson. Fantatrao ve?… Tamin'io andro io, tsy tamin'ny isa fotsiny izy, nanome fanampiana roa tsara izy tamin'ny nandresen'i Arsenal ny 3-0 tamin'i Eintracht Frankfurt tamin'ny lalao vondrona fanokafana ny 2019-20 UEFA Europa League. Ity ambany ity ny porofo an-tsary.
Rehefa nanatanteraka ny nofinofin-janany voalohany i Bukayo Saka tamin'ny nanatratrany ny tanjony Arsenal voalohany, nomeny ny dadany ho an'ny FaceTime Call haingana. "Tsy afaka niresaka taminy aho satria tian'ireo mpanazatra ahy hiditra amin'ny rano fandroana mba ho sitrana haingana aorian'ny lalao. Napetrakay fotsiny ny ankafizinay" Hoy izy.
Raha tokony ho nianjera tamin'ny fanombohana mahazatra, ny ankavanan'ny havia dia nandeha tamin'ny tanjaka mankany amin'ny tanjaka. At 18 taona sy 125 andro taloha, Saka dia zandriny indrindra tamin'ny Arsenal zokiolona indrindra tamin'ny tantaran'ny Premier League i Saka mba hanombohana fifandonana an'aretina Man Utd vs Arsenal. Gaga koa izy mpankafy tamin'ny lalao tamin'ny alàlan'ny fifindra-monina Ashley Young.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia i Bukayo Saka dia hitan'ny ankamaroan'ny mpankafy ho fampanantenana mahafinaritra mahafinaritra ho an'ny taranaka elatra havia an'i Arsenal taorian'ny nandavan'i Freddie Ljungberg. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Relationship Life
Ho an'ny fahombiazan'ny fahombiazana ary mitombo amin'ny fangatahan'ny baolina kitra anglisy dia azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpankafy dia tsy maintsy nanontany raha manana sakaizany na manana vady i Bukayo Saka. Eny! Ny endrik'ilay zazakely mahafatifaty ary miaraka amin'ny fomba filalaovany dia azo antoka fa hametraka azy ambony ho an'ny sipa tovovavy.
Fanontaniana miditra amin'ny sakaizan'i Bukayo Saka. Ny trosa Sortitoutsi
Taorian'ny fanadihadiana maromaro, dia hita fa i Bukayo Saka dia tokana (amin'ny fotoana fanoratana). Fantatsika fa noho ny toetra tsy voavela heloka amin'ny baolina kitra anglisy ambony indrindra dia tsy maintsy nisafidy ny hifantoka amin'ny asany i Saka fa tsy hitady sipa na olona ho vady.
Amin'izao fotoana izao dia afaka milaza isika fa i Saka dia nanao ezaka mba hisorohana ny jiro rehetra amin'ny fiainany manokana. Ity zava-misy ity dia manasarotra an'ireo bilaogera toa antsika mahazo vaovao momba ny fiainam-pitiavany sy ny tantarany. Na izany aza anefa dia mbola azo atao ny manana sipa. Nefa aleony tsy hanao izany imasom-bahoaka, farafaharatsiny ho an'ny ankehitriny.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny zava-misy momba ny fiainanao manokana Bukayo Saka dia hanampy anao hahazo sary tsara kokoa ny toetrany mifangaro amin'ny raharaha baolina kitra.
Bukayo Saka Fiainana manokana. Ny trosa amin'ny Twitter
Rehefa hihaona aminy ianao dia ho hitanao fa velona i Bukayo Saka ary mampihatra fomba metimety hiaina fiainana milamina. Izy ihany koa dia olona iray sariaka sy ambany ary midina amin'ny mpankafy be dia be. Mandritra ny fiofanana dia mandinika ny kely indrindra amin'ny antsipirihany izy ary miantoka fa tsy misy zavatra apetrany amin'ny kisendrasendra.
Miverina any Nizeria ary na any Royaume-Uni aza, ny naman'i Bukayo Saka sy ny mpiray tanindrazana dia mahita azy ho harem-pirenena izay tokony harovana amin'ny lafiny rehetra. Zahao ny video eto ambany.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
I Bukayo Saka dia mirehareha amin'ny razambeny sy ny Nizeriana amin'ny vanim-potoana tsara sy ratsy. As mofo finaritra, faly izy fa nandeha tamin'ny lalan'ny fianakaviany mankany amin'ny fahaleovan-tena ara-bola isaorana baolina kitra.
Bukayo Saka Fianakaviana sy havana; ny reniny, dadany, rahalahiny, rahavaviny, dadatoany, nenibavy, sns, izao dia mijinja ny tombontsoa amin'ny fananana ny tenany manokana eo an-tànan'ireo raharaha baolina kitra anglisy. Amin'izao fotoana izao, al ny havany sy ny havany manana daholo nisafidy ny tsy hitady fanekena imasom-bahoaka na dia betsaka aza ny fomba ifandraisana amin'ny media sosialy.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Lifestyle
Ny fanaovan-javatra eo amin'ny tampon-tany sy ny fahafinaretana amin'izany dia tontolo roa samy hafa ho an'i Bukayo Saka raha ny fiainany no jerena. Na dia mino aza izy fa manao Ilaina ny vola amin'ny baolina kitra, fa ny fototra mafy oriny dia nanampy azy hitandrina sy hamolavola ny volany.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, i Bukayo Saka dia tsy navelan'ny fiainana fiainana mora tazon'ny fikambanan'ireo fiara, lafo be sns.
Bukayo Saka Fiainana- Izy dia manasitrana amin'ny fiainana lafo vidy
Ao amin'ny tontolon'ny baolina kitra maoderina misy ireo tselatra mailo sy lahatsoratra maro amin'ny haino aman-jery sosialy mampiseho ny harena sy ny fiainana lafo vidy, afaka milaza isika fa Bukayo Saka dia fanafody mamelombelona.
Torohevitra momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazana Bukayo Saka - Untold Facts
Tsy izy irery no Nizeriana tao amin'ny Akademia: Arsenal FC Academy dia lasa mody haingana ho an'ireo mpilalao marobe Nizeriana. Vao haingana, nanomboka ny fotoana nanoratany, ny akademia dia nanolotra talenta fitadiavana talenta fampanantenana efatra miaraka amin'ny fakana Nizeriana - Avy miankavia miankavanana kosa dia i Arthur Okonkwo, Armstrong Okoflex, James Olayinka ary Xavier Amaechi.
Kintana Nizeriana hafa ao amin'ny Akademia. Ny trosa Ny masoandro, BBC, ArsenalCore ary Flickr
fivavahana: Raha araky ny voalaza etsy ambany dia ny caption Instagram dia “Zanak'Andriamanitra”Ary io caption io dia mitovy amin'ny an'i Joe Willock mpiara-miasa aminy. Ho antsika dia misy fika lehibe iray izay ny fivavahan'i Bukayo Saka dia ny kristianisma.
Ny Fivavahan'i Bukayo Saka- nanazava. Ny trosa amin'ny IG
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny fahazazan-jaza Bukayo Saka sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.